Shirka Midaynta maaliyada Somaliya ee Kismaayo ka socday,ayaa soo afmeermay. | allsanaag
Shirka Midaynta maaliyada Somaliya ee Kismaayo ka socday,ayaa soo afmeermay.
Shirkii oo uu saaka daah-furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, Axmed Maxamed Islaan, ayaa waxa ka qeyb-galay wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, wasiirada Maaliyadda heer dowlad goboleed iyo mas’uuliyiin ka socday gobolka Banaadir.
Sida ku qorneyd Jadwalka Shirka, waxay ahayd in uu socdo mudda saddex maalmood ah laga soo bilaabo 19-ka bishaan December ilaa 22-December oo ku beegan maalinta berriya, balse Shirka oo Sabtida maanta furmay ayaa isla galabta la soo geba-gabeeyay.
War-murtiyeed laga soo saaray Shirkaasi, ayaa lagu sheegay in la isku raacay in dhammaan xogaha Maaliyadeed ee dalka si joogta ah loo wadaago, islamarkaana lagu wada-shaqeeyo Shax Maaliyadeed ay degsadeen dhinacyada.
Shirka kan xiga ayaa sidoo kale lagu ballamay in 1-da Maarso ee sannadka soo socda 2020 lagu qabto magaalada Baydhabo ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
← Saiyidka oo shiriyey Federaalka Iyo maamul goboleedyada Cumar Cabdirashiid oo si weyn looga soo dhaweeyey Garoowe →